31/10/2012 15:36 -hainao ve...
Miodina ny tany, inona no atao ? Tsy vitsy amintsika no fanina matetika noho ny antony tsy fantatra. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy mety hanampy anao. Aleo misoroka : Raha tojo io olana io matetika ianao dia misy fiovana tsy maintsy atao amin’ny fomba fiaina andavanandro. Eo amin’ny sakafo ohatra dia : - Tokony hahena ny sira. Mahatonga ny vatana hanangon-drano mantsy izany ka vao maika mandrisika ny fikorontanana ao amin’ny ilay taova kely mahatonga antsika hijoro tsara « oreille interne »....
23/08/2012 14:32 -Ny lanjan’ny lalao eo amin’ny fiainan’ny zaza
Ny lanjan’ny lalao eo amin’ny fiainan’ny zaza Misy amintsika ray aman-dreny ny mieritreritra ary manambany fa tsy misy dikany ny lalao eo amin’ny zaza. Tsia, diso anefa izany fiheverana izany. Aoka ho fantatsika fa maro ny soa azo...
23/08/2012 14:30 -RIRININA NY ANDRO, MAMELY MAFY NY KOHAKA
RIRININA NY ANDRO, MAMELY MAFY NY KOHAKAVao nanomboka ny volana jona dia nirongatra izay tsy izy ny kohaka. Ny mahagga dia somary nahery vaika kokoa izy t@ ity taona ity ka tsy vitsy ireo mimenomenona @ tsy fahombi...